Victoria House Resort & Spa, Belize Zvibodzwa Nyowani Kufara & Runyararo Muzuva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Victoria House Resort & Spa, Belize Zvibodzwa Nyowani Kufara & Runyararo Muzuva
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Pool maonero eVictoria House Resort & Spa, Belize
Iyo Victoria House Resort & Spa's inowana mubairo-inokunda chitsuwa chivakwa kubva pamhenderekedzo yeBelize inopa vashanyi huwandu hwakawanda hwezvakanaka zvechirangaridzo.
Iyo nzvimbo yekutandarira yakazivisa zvipiro zviviri zvitsva zvevaenzi - iyo Petite Kutiza uye neBlissfully Belize Mapakeji kukurudzira kuzorora kwakanyanya kana kutsvaga kunakidzwa.
Victoria House inzvimbo ine runyararo umo vashanyi vanogona kunakidzwa nekuzorora pamwe neakawanda ezviitiko zvinonakidza.
Dzimba dzakanaka, zvepasi rose zvinopihwa, uye sevhisi yekushandira ndizvo zvinowana vashanyi pazororo ravo rakanaka.
Victoria House Resort & Spa, Belize, inzvimbo yepedyo uye yakasarudzika iri pachitsuwa cheAmbergris Caye cheBelize, inofara kutanga zvipo zviviri zvitsva zvevaenzi - iyo Petite Escape uye neBlissfully Belize Mapakeji kukurudzira kuzorora kwakanyanya kana kutsvaga kunakidzwa. Vashanyi venzvimbo yegungwa vanokwanisa kunakidzwa ne3-kusvika-7-husiku kutiza kwakamisikidzwa kupa rudo, zororo, kunakidzwa, uye kunakidzwa. Nedzimba dzekugara dzakanaka, zvepasirose zvigadzirwa, uye nenyasha sevhisi, Victoria House Resort & Spa ndiyo nzvimbo yakanaka yekubatanidzwazve nevadiwa uye nekuita ndangariro.
"Victoria House inzvimbo ine runyararo umo vashanyi vanogona kunakidzwa nekuzorora pamwe neakawanda ezviitiko zvinonakidza," akadaro Janet Woollam, maneja mukuru weVictoria House Resort & Spa. "NePetite Escape Package kana Blissfully Belize Package, vashanyi vane hupfumi hwesarudzo uye vanogona kutora mukana wezviitiko zvinoyemurika zveparesitorendi zvakare vachinge vaine mukana wekutsvaga chitsuwa ichi chakanakisa nekuwana tsika yadzo yakasarudzika pakumhanya kwavo pane yavo chaiyo gorofu. ngoro. ”
The Petite Kutiza Pasuru zvinosanganisira:
• Nzvimbo dzekugara dzakanaka mune imwe imba yeCasita kana yePalmetto
• Kudya kwemangwanani kwakazara zuva nezuva
• Bhodhoro reProsecco pakusvika uye yekutambira "Belizean Colada" cocktail
• Rimwe zuva gorofu renhare (kusanganisira gasi neinishuwarenzi)
The Nomufaro Belize Package zvinosanganisira:
• Signature Relaxation Massage kurapwa kweawa imwe chete kune vaviri pa spa (yakakosha pamadhora mazana maviri nemakumi maviri)
• $ 150 kiredhiti yekushandisa pane-saiti dhiza shopu
• Bhodhoro reProsecco uye yekutambira "Belizean Colada" cocktail
• Rimwe zuva kukwereta ngoro yegorofu kusanganisira gasi
• Kushandisa kusingagumi kwemabhasikoro, kayaks, mabhodhi ekumira-kumusoro uye magiya e snorkel
• Kudya kwekuseni kwakazara Mazuva ese
Victoria House Resort & Spa inozivikanwa nekuzorora kwayo "chitsuwa vibe" uye isina shangu kushongedzwa munzvimbo yese yekutandarira. Imba yacho inoratidzira pekugara kwakasiyana senge quintessential tropical Casitas, dzimba dzakazvimiririra dzine dzimba dzega, dzimba dzekuona dzimba, kana dzimba dzakashongedzwa zvine mutsindo mune mbiri-nhurikidzwa colonial style chivakwa. Victoria House Resort & Spa inodada zvakare kuratidza a yakazara-sevhisi spa uye nzvimbo yekusimbisa muviri pamwe nematatu akasarudzika ezvekugadzirira zvechiitiko chese.
Yakavezwa pamucheto peimwe yezvishamiso zvepanyama zvepasirese, Belize Barrier Reef, Victoria House inopa akasiyana siyana mafaro anoshamisa. Vaenzi vanogona kuzorora pamvura dzinozorodza dzepa-saiti nemabhichi akasarudzika, kana kutora chikamu mune zviitiko zvinonakidza zvakadai sekuchovha bhasikoro, kayaking kana pads boarding. Iwo mazvikwata ane ruzivo uye veteran zvikwata kuVictoria House uye PADI-yakasimbiswa Fantasea Dive Shop iri pane iyo chivakwa pari, inogona kuronga kuwanda kwezviitiko zvevashanyi senge yekudonha, snorkeling, hove, uye caving. Fantasea Dive Shop zvakare inopa magiya rentals uye zvitupa.
Chitsuwa ichi chinowanikwa nyore kuburikidza nendege yemaminetsi gumi nemashanu kubva Belize guta, mamaira makumi matatu nemashanu kure. Kutsvaga padyo tembere dzekare dzeMayan, zip-lining pamusoro pemasango canopies akazara neBlack Howler Monkeys, kutora rwendo rwemasango emvura, kana rwendo rwekudonha kuenda kuWorld Heritage coral reef zvese zvingangoitika paAmbergris Caye uye inogona kuumbanidzwa kuburikidza neyakavakirwa concierge timu. Ose mapakeji anowanikwa izvozvi kuburikidza naDecember 35, 20. Mamwezve ruzivo uye maitiro ekuverenga anogona kuve akawanikwa pano.
Pamusoro pezvo, kune hutano nekugara kwevaenzi vevashanyi, vese vashandi vakadzidziswa zvakakwana pamusoro pekukosha kwekuchengetedza matanho epamusoro ezvehutsanana uye ekuchengetedza zvirongwa vachipa hunyanzvi uye kugashira ruzivo rwevaenzi. Iyo nzvimbo yekutandarira yakamisa nzvimbo dzekuchenesa maoko mukati meimba, yakatumira UVC Handheld Disinfectant Units yekuchenesa dzimba dzevaeni, nzvimbo dzeveruzhinji, uye nzvimbo dzezvinwiwa, uye inoshandisa zvimwe zvigadzirwa zvekuchenesa zvakachengetedzwa, zvakaita seAqueous Ozone yekuchenesa mvura uye A / B Cold Ikutsvaira kwakakodzera sterilization yenzvimbo hombe.
Nezve Victoria House Resort & Spa
Inowanikwa muBelize paAmbergris Caye, rakakura kwazvo pamhenderekedzo dzeBelizean Islands, Victoria House ingori mamaira maviri kumaodzanyemba kweSan Pedro Town inoyevedza. Iyo nzvimbo yekutandarira inopa kuravira kweshangu dzisina shangu izvo zvinoita kuti vashanyi vadzoke kuzowanda, iine makamuri evaenzi makumi mana nematanhatu kubva muchitaira kubva padenga remba casitas kuenda kumahombekombe dzimba dzekuvakira dzine dzimba dzega, dzimba dzekudyara-dzimba, uye dzimba dzekuona dzegungwa. Iyo Palmilla Restaurant uye Admiral Nelson's Bar vanozivikanwa nekuda kwezvakanaka zvekudya uye zvinwiwa zvinorumbidzwa neinoshamisa, yakasarudzika sevhisi. Kuchenjerera kune zvakadzama nevashandi uye manejimendi zvakafanana zvakawana rukudzo kubva kune vekunze vezvenhau uye mibairo kubva kumasangano ane mukurumbira akadai seConde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanyira pano.